Waa mid ka mid ah hawlaha ugu culus aya si ay u ururiyaan heeso iyo iyaga abaabulo. User A ka fekeri karaa shaqo ku lug leh ururinta heeso iyo in la hubiyo in dhammaan ay sii si isku mid ah u dhacdo gaar ah u adag. Waa sabab la mid ah in aysan rabin in kale in ay dhex maraan dhibaato la mid ah sida ay sameeyeen si aad u hesho, ku ururiyaan oo abaabulaan songs in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. On gacmaha kale xadaynta in Lugood sidoo kale ma ogola in dadka isticmaala si aad u hesho playlists ay dhex kuwa kale oo halkan baahida saacaddii waa in la helo habab lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in playlists waxaa loo gacangelinayaa in iskutallaabta kuwa u jeclaaday sidii hadiyad ama a calaamo of free niyad samida la'aan si ay ku raaxaysan karaan heesaha fudud oo ku qanacsan.
Part1, Jidadkiinna Free si ay u wadaagaan playlist Lugood
Part2: Iyada Mac
Part3: Iyada oo CD gubanaya
Part4: hab fudud si ay ula wadaagaan Lugood playlist in macruufka (iPhone / iPad / iPod) la Wondershare TunesGo
Part5: Share Lugood playlist la Android la TunesGo
Siyaabo Part1.Free si ay u wadaagaan Lugood playlist
Waa mid ka mid ah kuwa su'aalo taas oo ay jawaabo badan oo dadka isticmaala ee arrintan la xiriira ayaa xaqiijiyey in jidka weyn ee aan la sahmin oo keliya, laakiin sidoo kale soo wargeliyey in ay dad kale si wareejinta playlist ma aha heshiis weyn oo dhan. Tutorial Tani waa labada saabsan lacag la'aan ah oo ay bixisay siyaabo in dad kale la wadaagaan playlists Lugood si users ka dooran kartaa kuwa sida iyaga siday doonayeen iyo rabitaan iyo inay dhawraan isticmaala shugri tixgelin hababka waxaa hoos ku xusan:
Qaybta 2. Iyada Mac
Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in Lugood waxaa laga soo wareejiyay mid Mac mid kale oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo in sida ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo in talaabooyinka soo socda la raacay si isku mid ah ay u soo sheegnay in ay ka fogaadaan wax kasta oo mad si kala iibsiga ma aha wax adag ee dhan:
i. Si aad u hesho in playlist la doonayo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in icon playlists waxaa riixi on galeeysid Lugood ah.
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button file la riixi in bar ugu weyn ee Lugood ay u bilaabaan nidaamka:
iii. Marka waxa la samayn user ay u baahan tahay in guji maktabada:
iv. On menu soo socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in playlist dhoofinta la doorto:
v. file waxay ku badbaadi doontaa la kordhiyo default ee XML ah. Waa in la ogaadaa in dheeraad ah ma aha in la bedelo.
vi. File XML la wadaagi karo qof kasta oo qaataha kaliya uu leeyahay si loo hubiyo in la isticmaalo geedi socodka ka mid ah ee kor ku playlist la keeno si Mac in ay dhamayso.
Qaybta 3. Iyada oo gubashadii CD
Sidoo kale waa arrin fudud oo lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in playlist Lugood waxaa laga soo wareejiyay hal nidaam si kale ama lala wadaago dad badan intii suurto gal ah. Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay si ay u helaan Lugood on Mac ama PC aad u bilowdo hawsha:
ii. ii. A playlist cusub waxaa ka dibna in la abuuray:
iii. Heesahaas ayaa ka dibna waa in lagu daro playlist si playlist uusan weli ku jira xaalad default ie madhan:
iv. CD A maran ka dibna in la geliyo ilaa waxaa loo aqoonsan yahay:
. v user ayaa markaa waa in ay raacaan file> Guba playlist in disk:
vi. Ka dib markii xulashada goobaha gubashada user ay u baahan tahay in guji meesha gubatay,
Qaybta 4. hab fudud si ay ula wadaagaan Lugood playlist in macruufka (iPhone / iPad / iPod) la TunesGo Wondershare
Waxaa xagga Eebeyna u samaynaysaan waa sidatan ugu fiican iyo kuwa ugu waxtarka badan si ay u hubiyaan in arrinta playlists la wadaago la xalin iyo user marnaba wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira. Wondershare Had iyo jeer sameeya yaabab iyo waqtigan ay la timaado, barnaamijkan firfircoon oo user saaxiibtinimo software caqli badan si loo hubiyo in la wadaago playlists guud ahaan qalabka macruufka kala duwan sidoo kale ma aha arrin mar dambe. User waxa uu leeyahay si loo hubiyo in geedi socodka soo socda waxaa la socda in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican laga helo iyo software-ka ayaa sidoo kale la fahamsan yahay si ay u marnaba weli oo arrinta u user ay u isticmaalaan software mustaqbalka:
i. User waa in uu soo bixi software ka URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ ama halkan si toos ah iyo raacdo Dardar si loo hubiyo in ay la soo bixi oo ku rakiban. Marka la sameeyo interface ugu weyn ee u muuqataa,
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in qalabka macruufka uu xiriir la PC la cable USB ah:
iii. Interface The dhan fayl oo ku yaal qalabka muuqan doonaa mar kale:
iv. Marka barnaamijka si buuxda u shaqaynaysa, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay "Music Transfer" icon on koonaha midig waxaa ku yaalla oo la cadaadiyo si aad u hesho habka sameeyo iyo u dhameystiro heshiiska uu sidoo:
Qaybta 5. Share Lugood playlist la Android la TunesGo
Inta badan dadka u arkaan in ay aad u adag tahay in la hubiyo in playlists ka macruufka wareejiyo OS Android ay si fudud ku qanacsan tahay si kastaba ha ahaatee la TunesGo ma aha heshiis weyn oo dhan. By socda hababka la mid ah wareejinta playlist Lugood in ay macruufka user a wareejin karaan playlist ah macruufka ku salaysan in Android fudayd iyo qanacsanaanta. Si aad u hesho shaqada lagu sameeyey wax waqti ah waxaa lagula talinayaa inay raacaan tallaabooyinka hoose si aad u hubiso in arrinta la xalin gudahooda:
i. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in qalabka android ku xiran PC ama Mac, si hannaanka bilaabo:
ii. TunesGo ayaa horay si toos ah lagu ogaan doonaa qalab iyo furi doonaa interface sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
iii. On guddi bidix user ay u baahan tahay in guji playlist ah waxa ku jira taas oo u baahan kala iibsiga:
iv. On guddiga xaq user ay u baahan tahay in guji dhoofinta markaas music:
v. software Tani caqli hubiyo in playlist la synced leh qalabka android oo halkan la qasabno yar habka ayaa ku dhameysatay kaalinta sida rabitaan user ayaa ka dhigi doonaa.
> Resource > Lugood > siyaabo fudud si ay ula wadaagaan Lugood playlists dadka kale